ဆောင်းရာသီတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် အသင့်တော်ဆုံး အစားအစာများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ဆောင်းရာသီတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် အသင့်တော်ဆုံး အစားအစာများ
အန်တီအောက်ဆီးဒင့်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အပြင် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါရှိသူများတွင် နှလုံးဆီ ကို သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းစေပါတယ်။
ကိုက်လန်၊ ဂေါ်ဖီထုတ်၊ ဟင်းနုနယ်ကဲ့သို့သော အစိမ်းရင့်ရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ ဗီတာမင် A, C, K တို့ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် folate အရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် မျိုးပွားနိုင်တဲ့အရွယ် အမျိုးသမီးတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
3. Citrus ပါဝင်သောသစ်သီးများ
သံပရာသီး၊ လိမ္မော်သီး၊ စပျစ်သီး စတဲ့ citrus ကြွယ်ဝတဲ့အသီးတွေက ဆောင်းရာသီမှာ အရည်အရွှမ်းဆုံးပါပဲ။ ဒီသစ်သီးတွေမှာ ဗီတာမင် C အပြည့်ပါဝင်ပြီး flavonoids လည်းကြွယ်ဝပါတယ်။ flavonoid က ကောင်းတဲ့ကိုလက်စရောတွေကိုအားပေးပြီး မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စရောဓာတ် (LDL) နဲ့ အဆီတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။
အာလူးက လူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေ ပြည့်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ခုခံအားကောင်းစေတဲ့ အကောင်းဆုံးအာဟာရဓာတ်2မျိုးဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင် C နဲ့ B6 ကြွယ်ဝတဲ့အပြင် မျိုးဆက်ပွားနိုင်တဲ့ အရွယ်အမျိုးသမီးများအတွက် အရေးကြီးတဲ့ folate လည်းကြွယ်ဝပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။
4. ဆောင်းရာသီထွက် သီးနှံများ
ဖရုံသီး၊ သခွားမွှေးသီး၊ ဝက်သစ်ချသီး စတဲ့ရာသီထွက်အစားအစာတွေက ဆောင်းရာသီရဲ့အကောင်းဆုံး အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီးနှံတွေမှာ ဗီတာမင် A, C, B6, K, ပိုတက်ဆီယမ် နဲ့ folate ဓာတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။